"Dagaal culus" oo ka socda South Sudan - BBC Somali
"Dagaal culus" oo ka socda South Sudan
Image caption Ugu yaraan hal milyan oo ruux ayaa ku barakacay dagaalka South Sudan
Mucaaradka dalka koonfurta Sudan ayaa dagaal culus kula jiro ciidanka taabacsan madaxweyne Salva Kiir Mayardit, sida uu sheegay afhayeen u hadlay militeriga South Sudan.
Philip Aguer ayaa sheegay in dagaallada ay ka socdaaan gobollada woqoyi-bari ee dalkaas, ee Upper Nile iyo Jonglei.
Goor sii horreysay ayay mucaaradka beeniyeen warka Qaramada Midoobey ka soo baxay oo ku eedeynayay inay boqolaal dad oo rayidh ah dileen kadib marki todabaadki la soo dhaafay ay la wareegen magalaada shidaalka qaniga ku ah ee Bentiu, ee gobolka Unity.
Heshiis xabad joojin ah oo bishi January la kala saxiixday ayaa joojin waayay rabshadaha.
In kabadan hal Milyan oo ruux ayaa ka barakacay guriyahooda tan iyo bishi December 2013, markaas oo uu dagaalka billawday.
Is maandhaaf siyaasadeed oo u dhexeeyay madaxweynaha South Sudan, Salva Kiir Mayardit, oo ka soo jeeda qabiilka Dinka, iyo madaxwene ku xigeenkiisii hore Riek Machar, oo ka soo jeeda qabiilka Nuwer, ayaa isu baddelay mid qabiil.
AU oo baareyso dembiyada South Sudan
Sawirro Sawirro: Dhibaatada haysata qaxootiga South Sudan ee Uganda
UN: Xasuuq ayaa ka dhacay S Koonfureed